TOP: Yaa ku Qanciyay Inuu Is Casilo Gud Jawaari? & Waxa laga Filan karo intuu Aamusanyahay. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
muqdisho ( mareeg news ) waxaa Subaxnimadii maanta baraalmaanka Federalka soomaaliya laga hor aqriyay warqad la sheegay ineey soo qoreen gudoomiye jawaari iyo Gu. Cawada, waraqadan oo uu aqriyay gudoomiye muudeey ayuu ku sheegay in jawaari iyo cawad iska casileen xilalkoodi kana tanaasuleen.
isbuucii hore ayeey eheed markii uu gudoomiye jawaari ku cel celiyay inuuna js casileen Balase waxaa la sugaa inuu saxaafada la hadlo uu arinkaan beeniyo ama maalinta arbacada ah ee la sheegay in baarlamaanka uu u qudbeeydoono La wada sugo Go’aanka rasmiga ah ee labada gudoomiye.
Madaxweyna somaaliya ayaa la rumeysanyahay inuu Gadaal ka riixayo is casilaada gudoomiye jawaari, Balse xildhibaanada vadbaada barlamaanka oo xalay si kulul ula hadlayay madxweynaha ayaa shirar gooni gooni ah la leh gud jawaari si ay u weydiiyaan sababta keentay inuu is casilo waa hadeey run tahay ama u sheego qorshihiisa xiga arintaan.
waxaa dhagaha loo wada raaricinayaa go’aan rasmi ah oo kasoo yeera gud.jawaari iyo mudeey mar kastana waxaa la filan karaa isbadal.